मोबाइल एपको संसार
ठिमी बस्दै आएकी रीता कार्की पछिल्लो समय होटल तथा रेष्टुराँ धाएर खानाका परिकार खाँदिनन् । प्रायः घरमै बसिरहने भएकाले उनी खाना तथा खाजा खानुपरे फूडमान्डुमार्फत आफूलाई मन लागेका विभिन्न परिकार मगाउँछिन् ।
आफ्नो स्मार्टफोनमा फूडमान्डु एप डाउनलोड गरेकी कार्कीले यही एपमार्फत उपत्यकाका विभिन्न रेष्टुराँको परिकार घरमै बसीबसी अर्डर गर्ने गरेकी छन् । उनी भन्छिन् ‘रेष्टुराँ, क्याफेमा धाइराख्नु नपर्ने भएकाले त्यो समयलाई अन्य काममा खर्च गर्छु ।’ प्रविधिले सबैको दिनचर्या सहज र सुविधायुक्त बनाइदिएको उनको भनाइ छ ।
फूडमारियो पनि यस्तै सेवा दिने अर्को एक कम्पनी हो । यसले रेष्टुराँको होइन, घरमै बनाइएको खाना तपाईंकहाँ ल्याइदिन्छ । अहिले फूडमान्डु र फूडमारियोसँगै भोजडिल्स, मामहाम, यमफूड, भोक लाग्यो र हाम्रो किचेन लगायतले खानाको परिकार उपभोक्तासम्म पुर्‍याइरहेका छन् । यी सबै एप कम्पनीलाई ग्राहकसँग जोड्ने सेतु बनेका छन् ।
त्यस्तै, प्रविधिको प्रयोग गरी एपमार्फत भुक्तानी सेवा लिइरहेका अर्का व्यक्ति हुन्, नवीन कार्की । जडीबुटी बस्दै आएका उनले आफ्नो मोबाइलमा ई–सेवाको एप राखेका छन् । यसले उनलाई बिजुली, केबल टीभी र इन्टरनेटको बिल भुक्तानी, घरबेटीलाई कोठाभाडा तिर्न तथा बैंक वित्तसम्बन्धी सबै कामका लागि सहज बनाएको छ । कार्की क्यासलेस जस्तै भएर हिँड्छन् अर्थात् नगद बोक्दैनन् । उनी भन्छन्, ‘यसले पकेटमाराको डर पनि भएन, समयको बचत पनि भयो ।’
उनले यसरी ई–सेवाबाट सेवा लिएको दुई वर्षभन्दा बढी भइसकेको छ । तर, अब उनी अर्को सेवाप्रदायक छनोटको तयारीमा छन् । ‘ई–सेवाको सेवा सरल, सहज र उत्कृष्ट हुँदाहुँदै पनि मलाई अर्को यस्तै सेवा दिने आईएमई पे प्रयोग गर्न मन लागेको छ,’ उनी भन्छन्, ‘सुनेको छु, खल्तीको सेवा पनि राम्रो छ ।’ बैंक खाता भएको जसले पनि कसैलाई रकम तिर्न तथा आपूmलाई कसैसँग सापट माग्न परे यस्ता मोबाइल एपले निकै सहज गरिदिएका छन् ।
ग्रामीण भेगमा यसको प्रयोग न्यून रहे पनि काठमाडौं उपत्यका र अन्य ठूला शहरमा भने मोबाइल एपको प्रयोगले व्यापक रूप लिएको छ । शहरी क्षेत्रमा डिजिटल भुक्तानी प्रणाली अगाडि बढिसकेको छ ।
मोबाइल एपबाटै मोटरसाइकल सेवा दिइरहेका सामाखुसीका सौगात पण्डित राइड शेयर सेवाप्रदायक कम्पनी टूटलसँग जोडिएका छन् । मानिसलाई एक ठाउँबाट अर्को ठाउँ पु¥याउन यो सहयोगी माध्यम बनेको उनी बताउँछन् । उनी यो पेशामा फुलटाइम नै दिएर लागिपरेका छन् । टूटलमार्फत मासिक २५ देखि ३० हजार रुपैयाँसम्म कमाइ हुने उनको भनाइ छ । दिनमा अधिकतम ७० देखि ८० ट्रिप गर्ने उनी बताउँछन् । एपको माध्यमबाट सेवा प्रदान गर्ने सारथी, यात्रु, पठाओ र टूटलले काठमाडौं उपत्यकाको सार्वजनिक यातायातलाई निकै सहज बनाएका छन् । मोबाइल एपमार्फत विभिन्न सेवा लिइरहेका ग्राहकको संख्या नेपालमा बढ्दो छ भने हजारौंले उक्त सेवासँग प्रत्यक्ष जोडिएर रोजगारीको अवसर समेत पाएका छन् ।
किराना व्यवसाय अर्थात् रिटेल बिजनेस पनि यसबाट अछुतो छैन । ई–टेल (इलेक्ट्रोनिक रिटेल) कम्पनी सस्तो डिल, दराज, हाम्रो बजार र मेरो किनमेलले पनि एपमार्फत नै अर्डर लिन्छन् ।
नेपाली बजारमा मोबाइल फोन भित्रिएको झण्डै दुई दशक भएको छ । योे अवधिमा मोबाइल सेवा र प्रविधिले मात्र ठूलो फड्को मारेन, इन्टरनेट सेवा पनि देशव्यापी हुन पुग्यो । इन्टरनेटको पहुँच बढेसँगै मोबाइल एपमार्फत सेवा दिने कम्पनीको संख्या पनि अहिले उकालो लागेको छ ।
भन्सार विभागको तथ्यांक अनुसार नेपालमा वार्षिक रू. २० अर्बभन्दा बढीको मोबाइल आयात भइरहेको छ । स्मार्टफोनका कारण पनि भ्यालु एडेड सर्भिस शुरू गर्न र विस्तार गर्न सहज भएको छ ।
विगत केही वर्षयता ओभर दी टप (ओटीटी) सेवा अर्थात् एपहरूको प्रयोग बढ्यो । मोबाइल एपको विकाससँगै नेपालमा पनि भाइबर, इमो, फेसबुक, ट्वीटर लगायत सामाजिक सञ्जालको प्रयोग पनि ह्वात्तै बढ्यो । अहिले नेपाली युवाहरू यस्ता सामाजिक सञ्जाल र एपमार्फत व्यापार व्यवसायमा अघि बढिरहेका छन् ।
नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको पछिल्लो एमआईएस प्रतिवेदन अनुसार नेपालमा मोबाइल सेवा प्रयोगकर्ता ४ करोड १० लाख पुगेका छन् । त्यस्तै, ब्रोडएन्ड इन्टरनेटमा हाल ६४ प्रतिशत नेपालीको पहुँच छ । इन्टरनेट र मोबाइल एप परिपूरकजस्तै हुन् । नेपालमा जुन रूपले इन्टरनेटको विस्तार भइरहेको छ सोही अनुसार समाज डिजिटलाइज्ड प्रणालीतर्फ लम्किरहेको छ । इन्टरनेटविना यी मोबाइल एपको सम्भावना छैन ।
नेपाल सरकारले पनि ५ वर्षभित्र डिजिटल नेपाल बनाउने अवधारणा ल्याएको छ । यसअन्तर्गत देशका कुल ५५३ स्थानीय तहमध्ये साढे ४५० भन्दा बढी स्थानीय तहले आनै एप ल्याएका छन् ।यसले स्थानीय तहलाई गतिविधि, अनुगमन र कार्ययोजना बनाई अगाडि बढ्न सहज भएको सूचना प्रविधि विभागका महानिर्देशक लक्ष्मीप्रसाद यादव बताउँछन् । बाँकी स्थानीय तह पनि मोबाइल एप सञ्चालनमा ल्याउने तयारीमा छन् । केही दिनअघि मन्त्रिपरिषद्को बैठकले नागरिक अधिकार एपलाई पनि स्वीकृति दिएको छ ।
मोबाइल एपमार्फत राइड शेयरिङको सेवा दिँदै आएको कम्पनी टूटलका कार्यकारी निर्देशक शिक्षित भट्ट भन्छन् ‘कयौं मानिसलाई यी एपको विषयमा अझै थाहा छैन । अबको विश्व ‘आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स’तिर केन्द्रित हुँदै छ । यस्तो अवस्थामा मोबाइल एपले सामाजिक तथा आर्थिक विकासलाई पनि प्रभाव पार्दै गएको छ ।’
नेपालमा पछिल्लो समय धेरै व्यवसायमा मोबाइल एप अनिवार्य हुन थालेको तर यसको नियमन पनि त्यतिकै आवश्यक रहेको फूडमान्डुका संस्थापक मनोहर अधिकारी बताउँछन् । ‘अबको युग डिजिटल युग हो,’ अधिकारी भन्छन्, ‘पछिल्लो समय व्यापार व्यवसायमा जुन रूपले एपको प्रयोग बढेको छ, यसले नेपालको प्राविधिक तथा सामाजिक मान्यतामा नै परिवर्तन ल्याउने देखिएको छ ।’
प्रविधिमा आएको परिवर्तनसँगै उपभोक्ताहरू अनलाइन तथा इन्टरनेटमार्फत सेवा लिन आतुर छन् । बजारको अवस्थालाई हेर्दा अबको बाटो मोबाइलमार्फत अनलाइनमै भएको ई–सेवाका संस्थापक अस्कर अलिको भनाइ छ । उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले यस्ता स्टार्टअप कम्पनीलाई नियमन गर्न कार्ययोजना अगाडि बढाएको उनले जानकारी दिए । नेपालमा ठूलो परिमाणमा पेमेन्ट गर्नुप¥यो भने डिजिटल पेमेन्टलाई अनुमति छैन यसका लागि अझै चेकबाट कारोबार भइरहेको देखिन्छ ।
टूटल, पठाओले छोटो समयमा काठमाडौंको सार्वजनिक यातायात सेवामा ‘डिसरप्शन’ गरे । सरकारले यिनको सेवा रोक्न खोज्दा उपभोक्ताहरू नै यसको बचाउमा आए । यसले प्रविधिमा आधारित व्यवसाय÷सेवालाई शहरी उपभोक्ताले कति आत्मसात् गरेका छन् भन्ने देखाउँछ ।
नेपाल राष्ट्र बैंकबाट मोबाइल एपमार्फत भुक्तानी प्रणाली सञ्चालन गर्न गेटवे कम्पनीहरूले इजाजतपत्र लिने क्रम बढेको छ । पेमेन्ट गेटवे कम्पनीको संख्या मात्रै करीब १ दर्जन पुग्न लागेको छ । राष्ट्र बैंकबाट वित्तीय कारोबारका लागि ई–सेवा, खल्ती, आईएमई पे, प्रभु पे, सेल पे र आई पेले इजाजतपत्र लिइसकेका छन् । तर, बजारमा प्रतिस्पर्धा गरिरहेका यी कम्पनीले नयाँ सेवा दिनेभन्दा पनि अर्कोको नक्कल गरिरहेका छन् । केही हप्ताअघि मात्रै ‘सेल पे’ नामक मोबाइल वालेट नेपाली बजारमा प्रवेश गर्यो । यो अन्य पेमेन्ट गेटवे एपभन्दा फरक छ र यसमा बैंकबाट सोझै बजारमा कारोबार गर्ने व्यवस्था भएकाले उपभोक्ताको आकर्षण यतापट्टि बढ्ने सम्भावना छ ।
ई–कमर्श लगायत अधिकांश वित्तीय कार्यालयले आफ्नै मोबाइल एपको विकास गरेका छन् । सरल र सहज भएका कारण मोबाइल ल्यापटप र कम्प्युटरभन्दा शक्तिशाली भइसकेको खल्तीका सञ्चालक मनीष मोदी बताउँछन् । तर, अहिले ग्रामीण भेगमा भन्दा पनि जहाँ इन्टरनेटको पहुँच छ कम्पनीहरू त्यतै केन्द्रित छन् ।
नेपालमा अहिले कुनै पनि मोबाइल एप कम्पनीले १ करोडदेखि १० करोडसम्म लगानी गरेका छन् । विशेषगरी, ठूला अनलाइन कम्पनीले रू. ५ देखि १० करोडमा कम्पनी सञ्चालन गरिरहेका छन् । तर, उपभोक्ताले भने डिजिटल भुक्तानीलाई अझै बुझ्न नसकेको मोदी बताउँछन् । अहिले नेपालमा कुल ३ प्रतिशत कारोबार मात्रै डिजिटल भुक्तानीबाट हुने गरेको वालेट सेवाप्रदायकको भनाइ छ ।
विश्व ‘क्यासलेस’ प्रविधिमा गइसकेको छ । सरकारी संस्था पनि डिजिटल भुक्तानीमै प्रेरित भइरहेका छन् । पछिल्लो समय हरेक क्षेत्रमा कार्डमार्फत भुक्तानी बढेको छ । समग्रमा व्यापार तथा व्यवसाय अबको ५ देखि १० वर्षमा पूर्णरूपमा अनलाइन प्रणालीमा जाने र यसका लागि मोबाइल एपले विशेष भूमिका निभाउने डिजिटल सेवाप्रदायकहरू बताउँछन् । तथापि, भविष्यमा ठूलो अर्थतन्त्र मोबाइल एपमा आधारित हुने सम्भावना रहेकाले यसको नियमन पनि आवश्यक रहेको उनीहरूको भनाइ छ ।